University of kuhlala Nuremberg - Funda Amazwe eYurophu
University of kuhlala Nuremberg
University of Erlangen Nuremberg Iinkcukacha
isixeko : Erlangen
isifinyezo : FAU
Zifumaneke : 1742
abafundi (nama.) : 40000
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa University of Erlangen Nuremberg
Ukubhalisa kwi-University of Erlangen Nuremberg
University of Erlangen Nuremberg yeyona uphando kwiyunivesithi zikarhulumente emizini Erlangen kunye Nuremberg eBavaria, Jemani. igama Friedrich-Alexander iphuma umseki yokuqala yeYunivesithi Friedrich, Margrave laseBrandenburg-Bayreuth, nomxhamli buKristu Frederick Charles Alexander, Margrave laseBrandenburg-Ansbach.
eJamani, zemveli kwiiyunivesithi osikelelayo ubugcisa abadli kuba isikolo zobunjineli okanye isebe. kunjalo, FAU linaso zobunjineli fakhalthi eyodwa.
FAU le yunivesithi karhulumente yesibini ngobukhulu urhulumente eBavaria. Ibe 5 amandla, 23 amasebe / izikolo, 30 amasebe zonyango, 19 kumasebe awo, 656 oonjingalwazi, 3,404 amalungu abasebenzi ezifundweni kalukhuni 13,000 abasebenzi.
Xa zesimesta ebusika 2014/15 ngeenxa 39,085 abafundi (dibene 3,556 abafundi abavela) ababhalise yu 239 kwiinkalo zokufunda, kunye malunga 2/3 ukufunda kwikhampasi kuhlala kunye eseleyo 1/3 kwikhampasi Nuremberg. Ezi nkcukacha-manani wabeka FAU kuluhlu phezulu 10 Iidyunivesithi inkulu eJamani.
in 2013, 5251 izidanga idyunivesithi 663 doctorates kunye 50 iingongoma post-zobugqirha abhaliswa. Ngaphezu koko, FAU wafumana 171 izigidi Euro (2013) mali lwangaphandle nyaka mnye, ngokwenza enye yunivesithi iingwanyalala wesithathu-zeqela ngemali eJamani.
in 2006 yaye 2007, njengenxalenye yephulo ukugqwesa likazwelonke, FAU wakhethwa Research Foundation Isijamani omnye abaphumeleleyo kwi German Universities Excellence Initiative. FAU kwakhona ilungu DFG (Research Foundation German) kunye naBaphathi Top Industrial inethiwekhi Europe.
Xa Academic Ranking of World Universities kunyaka 2014, FAU sasisele yesibini phakathi kwiiyunivesithi isiJamani in Engineering / iTeknoloji kunye neqela Computer Sciences zonke ezine ebonisayo iparameters TOP, FUN, HiCi yaye PUB.
Faculty of Abantu, Sciences Social, kunye Theology
Faculty of Business, Economics, kunye noMthetho
1743 - The University busekelwe yi Margrave Friedrich laseBrandenburg-Bayreuth
I-University Erlangen yasekwa ngomoya absolutism bakhanyiselwa. Umsebenzi zeeyunivesithi German ngenkulungwane elinesibhozo ukukhonza iimfuno oozilawuli ezininzi ngokwenza amalungiselelo ukulungiselela imfundo noqeqesho abasebenzi bakarhulumente ukwandisa udumo neenkosana.
Eli umthombo oyinhloko izizathu Margrave Friedrich of Brandenburg-Bayreuth ngubani waliseka Friedrichs-Universität in ulawulo yakhe 1743 ngoncedo Margravess Wilhelmine kunye yingqonyela yokuqala University, Daniel de Superville.
Kwaba eyunivesithi wesithathu ukuba kusekwa Franconia, emva neeyunivesithi Altdorf and baseWürzburg, kwaye zisekelwe kwisixeko ombuso Erlangen kwi Academy knight eyayisakuba elise Hauptstraße. Ukuvulwa ngokusesikweni i-University senzeka 4 EyeNkanga 1743, isiganeko apho nangoku khumbula qho ngonyaka iyafa academicus.
1769 - The University yenziwe yi Margrave Alexander
Emihleni yayo yokuqala, neYunivesithi Erlangen wayengomnye amaziko zincinane hlobo yayo. A ewonke 64 abafundi ababhalise kwi-University esitsha kunyaka kwesiseko salo baza bafundiswa 16 oonjingalwazi; -avareji yenani labafundi zahlala ngezithuba 200 ixesha elithile.
Eminyaka zokuqala ezimbalwa sobukho yeYunivesithi babeba iingxaki zoqoqosho ukususela margraviate laseBrandenburg-Bayreuth waba omncinane kwaye ingakumbi owayesisityebi. Kwaze kwathi 1769, xa safa umgca Bayreuth kunye margraviate laseBrandenburg-Bayreuth lingadibananga naleyo Brandenburg-Ansbach, ukuba Friedrichs-Universität wanikwa isiseko esiqinileyo ngemali. Behlonipha Margrave Alexander, umlawuli omtsha, lowo wayeza kuba umxhasi lokuqala elikhulu yeYunivesithi, i-University labizwa Friedrich-Alexander-Universität kulo nyaka.
Uluhlu yemveli lwamacandelo kokufundiswayo ngaphakathi ikhono of Theology, uMthetho, Medicine and Philosophy. Ngaphandle kwibhotwe Hohenzollern leyo, njengoko ekhaya ukuya dowager, wadlala kuphela indima yoluntu ebekiwe, isixeko esincinane margravial of Erlangen akabanga kwezopolitiko ebalulekileyo, amaziko loqoqosho okanye zenkcubeko, kunye oonjingalwazi yeYunivesithi ngoku ufumene iwonga omkhulu phakathi kuluntu esi sixeko.
1810 - Franconia iba yinxalenye eBavaria
iminyaka engamashumi amahlanu emva isiseko salo, i-University benze inguqu enkulu ngenxa yezepolitiki. Ukutshintshelwa amandla isithsaba Prussia ngo 1792, kubukhosi isisiFrentshi 1806 yaye ekugqibeleni ukuya isithsaba wohlobo ku 1810 baguqula University margravial ibe kwiziko likarhulumente-run. Nangona oku kwakuthetha ukuba ulahlekelwe kakhulu lokuzimela lalo, ezifana kolawulo bayo kunye namalungelo akhethekileyo elinikwe ngummi eyunivesithi, kwakhona ngcono iimali yeYunivesithi.
Inani labafundi wavuka waza wahlala ngokuthe ngcembe kwi 400 ngeli xesha. Izicwangciso ndawonye ukuze imfundo eyunivesithi University of Landshut, ebekwe yi the wohlobo nguMphathiswa of State, Maximilian Joseph Montgelas, kwakuthetha ukuba ekuqaleni kwenkulungwane elinesibhozo ikamva yaseFlorida isichenge kwi isihlandlo ngaphezu kwesinye. It wayenetyala ukusinda yayo ekugqibeleni yokuba yokuba lo mntu kuphela wezakwalizwi yamaProtestanti eBavaria. Ukuba oku yaqhubeka ikhona, bonke abafundi wohlobo wezakwalizwi zamaProtestanti, kabani amanani ikhule kakhulu ngenxa yokuhlanganiswa yakutshanje Franconia kukaThixo eBavaria, ukuba kuye kwanyanzeleka ukuba ukufunda ngaphandle eBavaria.
1818 - I-Schloss ke ngokusemthethweni ezinikelwe University
in 1818, i-University yafumana inani elikhulu izakhiwo ezintsha. Emva kokufa uSophie Caroline, umfazi wesibini umsunguli kwiYunivesithi, ngubani ayehlala e Erlangen njengoko dowager ukususela 1764, UKumkani Maximilian I uYosefu yaseBavaria wanikela Schloss, i Schlossgarten, ngaphambili orangery kunye nezinye izakhiwo eziphantsi yi margraves kwiYunivesithi.
Isiqingatha sokuqala kwinkulungwane yeshumi elinesithoba kwakhona wabona utshintsho UWilhelm von Humboldt ezinkulu ngengqiqo nemfundo yaseyunivesithi, apho wakhuthaza ukuhlanganiswa uphando kunye nokufundisa. Izifundo elingaphambili yagxila indlela ngokungqongqo exegetic ukuba imisebenzi eqhelekileyo ngoku swi le nkqubo yezifundo kunye nesikhokelo ngokubhekiselele uphando oluzimeleyo.
1824 - Erlangen Hospital University busekelwe
Ukwakhiwa kwe-University Hospital Erlangen, esibhedlele kwimpuma ye Schlossgarten, ukuba iprojekthi yokuqala enkulu isakhiwo eqaliswe yiYunivesithi yaye yagqitywa 1824. Uphuhliso olukhawulezileyo malunga kwentlobo ekhulayo phakathi izifundo, kwaye iindawo ezintsha zophando amayeza kunye nenzululwazi kwisiqingatha sesibini senkulungwane yeshumi elinesithoba yimfuneko ukwakhiwa kwezakhiwo ezitsha ezininzi ehlabathini Schlossgarten kanye Universitätsstraße, Ilizwi likaYehova elafika kuba ngundoqo kwi University. Izakhiwo ezininzi iphawulekayo kweli xesha unguye Kollegienhaus (1889), i nokwakheka kwegazi izakhiwo (1897 yaye 1906) kunye University Library (1913).
1890 - The University uye umlinganiselo abafundi eziliwaka
Ukunatyiswa ubukhulu waya isandla ngesandla kunye nokudalwa kumasebe amaninzi omtsha namanye amaziko ngaphakathi kwabo, ohlukile kumasebe, nje kuphela wafundisa lwamacandelo emfundo kodwa uphando oluzimeleyo. amanani abafundi nabo anda kakhulu kwisiqingatha sesibini senkulungwane yeshumi elinesithoba. Kwisiqingatha ehlotyeni 1890, inani labafundi ababhalise babehamba phambili 1000 uphawu okokuqala,
ethetha ukuba i-University ubekwe inani 15 phakathi 21 iiyunivesithi uBukhosi German ngokobungakanani. Olu phuhliso kwakhona ngokupheleleyo utshintshe uzalano phakathi kweYunivesithi kunye nesixeko. Kanti umfanekiso Erlangen bakaThixo benkulungwane elinesibhozo kwakugqitywa yi yobuciko Huguenot kunye yezandla, kwinkulungwane yeshumi elinesithoba iYunivesithi waqalisa ukuba badlale indima ebonakalayo.
Phakathi oonjingalwazi abaziwayo ababefundisa kwiYunivesithi aba wezakwalizwi Adolf von Harleß, igqwetha kwamaKristu ulonwabo, uprofesa amayeza Franz Penzoldt, le mbali Karl Hegel, sobulumko Ludwig Feuerbach, uprofesa German Benno von Wiese, uprofesa wezifundo oriental kunye imbongi Friedrich Rückert, sezibalo Max Noether, yamachiza Eilhard Wiedemann, i ekhemisi Emil Otto Fischer, i yezityalo uJohann Christian Daniel Schreber, i usokhemisi Theodor iErnst Martius, i isazi uEnoki Zander, kwaye yokwakheka Bruno von Freyberg.
Abanye abafundi abaziwayo Erlangen 's ziquka theologist UWilhelm Löhe, umqondisi-mthetho, laseburhulumenteni Prussia Karl Freiherr von Stein ukuya Old Stone, ugqirha Samuweli Hahnemann, ababhali Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, Daniel Schubart kunye August Graf von Platen, i kwemithi nguYusto von Liebig, yamachiza Georg uSimon Ohm kunye sezibalo Emmi Noether.
1920 - I Pro-Ngqonyela iba onguMphathi
Ukuqhambuka kweMfazwe Yehlabathi Yokuqala ngo 1914 waba nefuthe kakhulu kwi University. Ngalo mhla wokuqala badibane, i Kollegienhaus , i Schloss kunye eziliqela amasebe kwi Universitätsklinikum Erlangen baguquka ezibhedlela abenzakeleyo. Ngeenxa zonke iikota ezintathu abafundi bachatshazelwa emkhosini okanye ubhaliso ngokuzithandela. Oku kwakhokelela ekubeni ukwehla omkhulu kumanani abafundi baqhubeka ukufunda. Ebudeni beminyaka yemfazwe apho ngokuqhelekileyo kuphela malunga 300 abafundi abafumaneka Erlangen.
Iziganeko zale wohlobo Revolution of 1918 yaye 1919 kunye nokupheliswa elandelayo ukumkani kwakuthetha ukuba isihloko 'yiNgqonyela Magnificentissimus' elingaphambili kuzelwe iNkosi uPhilip elibusayo ngoku azisekho. I-ofisi ye Pro-Ngqonyela ngoko kwatshintsha ku 'onguMphathi (Magnificus)'ku 1920. Ngokufanayo, elithi 'Pro-Ngqonyela' indawo umxholo yangaphambili 'Exprorektor'. Ukuze abafundi abaninzi, iminyaka ngoko nangoko emva leMfazwe yokuQala yeHlabathi waniphawula yintlupheko kunye abafundi abaninzi abavela kwiindawo ezihluphekileyo beza kwiYunivesithi ngethemba yokwakha amakamva ezintsha ngokwabo nangona imfundo yabo athobekile.
Kwamandla emali kunye imilinganiselo kwemibutho yokuya eliqela wongezelela ngosizi lwabo. I-Student Abameli Komiti yasekwa ngo 1919 yaye ithe yalandelwa 1922 yi yintoni na ngoku Studentenwerk (Iinkonzo Student) leyo, e 1930, wavula Studentenhaus ukuba sisemi kwi Langemarktplatz namhlanje. Emngxunyeni, nokuba, emva nokukhula kwayo olukhawulezileyo phakathi kwinkulungwane yeshumi elinesithoba, 1920 yaba ixesha yokudodobala for the University.
1928 - I-Faculty of Sciences busekelwe
Ukubaluleka Ukwanda iinzululwazi zendalo eyaba ngokucacileyo kwisiqingatha sesibini senkulungwane yeshumi elinesithoba kwakhokelela utshintsho kubume yeYunivesithi. in 1928, iinzululwazi zendalo bahlukaniswa off ngoko oko Faculty of eyoluntu iiSayensi zezeNtlalo, anikwe ngayo ubume yabo.
1933 - ukuzimela IYunivesithi abawela ngamaxhoba lweSocialism National
A sezulu kobuzwe uluvo sele ngokucacileyo e University Erlangen ngexesha Weimar Republic, yaye ngoNovemba 1929, i German National Association Socialist Student wakwazi uninzi ngokupheleleyo ezihlalo kunyulo Abameli Student IKomiti okokuqala nakweyiphi na eyunivesithi German. Ngexesha iminyaka ubuzwilakhe yamaNazi, Erlangen yehlelwa naziphi na iziganeko kwakhona kwenzeka kwezinye iiyunivesithi, ezifana ekugxothweni oonjingalwazi akafuni toe umgca iqela le, incwadi ngokutshiselwa May 1933, okanye ukufakwa ngezihloko nifane ideology lwamaNazi, ezifana 'uphando uhlanga'.
Inkululeko academic yeYunivesithi lususiwe ngexesha lwamaNazi kwaye umgaqo uMlawuli kwakhona isicelo kwi-siseko eyunivesithi, njengoko bayeka ukunyulwa Umphathi ngumzimba professorial kodwa wachongwa Reichsminister yemicimbi yemfundo. Njengokuba kwenzeka kwiiyunivesithi ngaphesheya eJamani ngeli xesha, amanani abafundi Erlangen lehla kakhulu ngenxa-nkqubo yemfundo lwamaNazi.
1945 - The University kusokwe nokwakhiwa
Ekupheleni yeSibini kweMfazwe Yehlabathi, Erlangen yaba idolophu eyunivesithi kuphela Germany, ngaphandle eHeidelberg, leyo osindileyo phantse yonke intshabalalo. Abafundi bathontelana kwiYunivesithi xa mfundiso waqala semester ebusika 1945/46, kwaye kukho kahlanu kubafundi abaninzi kangangoko phambi kwempi yaba. Ekubeni kwisiqingatha ehlotyeni 1927 kwakube 1340 abafundi baye kunye neminyaka elishumi kamva khona 967, yi semester ihlobo 1947, kwiYunivesithi kwafuneka 5316 abafundi.
kunjalo, njengokuba nezinye iiyunivesithi German ngcembe kuvulwa iingcango zazo, amanani Erlangen waqalisa ukuba ehlise kwakhona ekupheleni kuka-1950, ukuze yi semester ebusika 1956/57, Erlangen le yunivesithi lincinci e West Germany.
Ngoku I-University kwakufuneka ukubonelela izakhiwo ezitsha ngokwaneleyo ngendlu onke amasebe ayo kunye namaziko. Kwiinzame ukulondoloza umlinganiswa yeYunivesithi kunye nezakhiwo zawo ngabanye zadityaniswa ndawonye kumbindi wesixeko, izakhiwo ezintsha engenziwanga kwindawo campus uyazimela kumbindi wedolophu, njengoko kwakunjalo kwenye, kodwa kunokuba yakhelwe ezahlukeneyo bayise kwiziko elo ngaphambili bakhonza ezinye iinjongo.
Oku kwakunjalo enqabeni yomkhosi ezindala Bismarckstraße, apho kwisakhiwo esitsha umthetho, yenkolo, eyoluntu ezentlalo yatyhilwa ku 1953. izakhiwo ezintsha Eminye ilandelwe kumbindi wesixeko, ingakumbi ukuba i-Faculty of Medicine, ezifana of Neurosurgery kwiSebe 1978, elakhiwa kwi Schwabachanlage apho ngaphambili kwikliniki ngengqondo ayemile.
Ukwanda kakhulu langutana olwaqhubeka kwiYunivesithi kwi 1960 zisendle zobunjineli. I post-imfazwe imfuneko yokuba kuncuncwe yanika amandla okuqhubela ukongeza isebe kwezobunjineli, umnqweno leyo uye wabonisa kwangethuba 1903. Abasebenzi kwi-Faculty of Sciences ngoku wavakalisa imfuneko lezifundo ezimele nobunjineli bokukhanda, leyo wanikwa inkxaso yeeNgwevu 1957.
1961 - I-Faculty of Business, Economics and Social Sciences busekelwe
Kungekudala emva kwezi ezongeziweyo, i-University zandiswa ngokudibanisa kwikholeji kuMasipala-ezixhaswa ngayo ushishino ngendlela eyahlukileyo, economics and Social Sciences eNuremberg, esakhiwa 1919, waya University ukuba zenze ngoko yintoni nkululeko yayo lesithandathu. Ukususela ngoko kwi-University bamkela igama phantsi kuyo eyaziwa namhlanje, University of Erlangen-Nuremberg.
Ukufundiswa ezoqoqosho kunye nolawulo ishishini, ezazikade de le ngongoma wadlala indima minor kuphela kwelalisakuba Faculty of eyoluntu Social Sciences ngo Erlangen, ayikwazanga ngoku wenziwe ngomlinganiselo omkhulu kwindawo yayo eNuremberg. Lo mdibaniso okukhawulezayo ukwanda kwamanani abafundi apho ifikelele incopho entsha ekupheleni kwe 1960.
1966 - I-Faculty of Engineering busekelwe
in 1962, emva mpikiswano mide, ekugqibeleni ipalamente wohlobo isigqibo ukuseka Faculty of Engineering e Erlangen. Ngoku kuhlonipha, i-University wayezenze nxamnye nesixeko Nuremberg leyo ecela ukuba eyunivesithi yobugcisa kumiselwa eNuremberg eminyaka.
Ekubeni kwimimandla kubanzi yokwakha umhlaba efunekayo kule projekthi zazingafumaneki kumbindi Erlangen, iziseko iyunivesithi entsha babekwa angasezantsi empuma yeso sixeko 1964. Ukusekwa ngokusesikweni Faculty of Engineering, leyo yaba lezifundo wesixhenxe kwi FAU ngexesha, kwenzeka 1966. Ngeli xesha, i-University iziko kuphela Jamani yecandelo zobunjineli leyo ihlanganiswe izakhiwo ezikhoyo eyunivesithi uphando bamandulo hayi cwangcisa njengoko yiyunivesithi elizimeleyo.
1968 - I intshukumo Umfundi iphuhlisa
at FAU, nje kwenye, kule minyaka ilandelayo wawuzaliswe intshukumo umfundi, intshukumo leyo neziphumo ezinje ixesha elide ngobomi academic. Uqhankqalazo Umfundi, nokwadala kwiiyunivesithi lonke Germany, ekuqaleni impendulo kwimiba apho kuphela eyunivesithi enxulumene, ezifana ebugxwayibeni isifundo. in 1969, ukuhanjiswa umfundi wakhula ezinkulu ngakumbi yaye waba isixhobo inkcaso ukuya inkqubo yezopolitiko ngokubanzi. Esebenzisana kunye namanye amaqela asekuhlaleni, oku wakhula oko yaba eyaziwa ngokuba intshukumo inkcaso extra-epalamente.
Kwakukho ungquzulwano olukhulu, ingakumbi kule mpikiswano phezu wohlobo Higher Education Act of 1974, amacandelo apho zavalwa nabameli babafundi ekusebenziseni igunya jikelele yezopolitiko, Obephethe German Higher Education Act of 1976. Le minyaka Iphinde yazisa iinguqu ezininzi umfanekiso yangaphandle yeYunivesithi, nje izithethe ezininzi ixesha elide-kusekwa ziye zapheliswa. Kwakukho isiphelo ukuya kooprofesa benxibe imiwundu kunye, e 1968, ekubhiyozeleni uSuku Umqambi xa, i 'efa academicus', kuze ke ngoko ukuba yabanjelwa ezimbejembeje Bunobungangamela Redoutensaal, watshintshelwa Ambience kunokuba flamboyant ngaphantsi Auditorium Maximus apho kuye kwenzeke ukususela.
1972 - I-Faculty of Education busekelwe
I-Faculty of Education yasekwa ngo 1972, ngokuba oyena lwesibhozo yeYunivesithi ngelo xesha. Yakhulela ngaphandle Institute for yoQeqesho lweeTitshala elasekwa 1956 yaye kamva eziphuculwayo 1958 ukuba i College of Education Nuremberg, kwikholeji yoqeqesho lootitshala, ngaphambi kokuba abe lokuqeqeshela FAU. by 2007, kwiYunivesithi kwafuneka 11 amandla, njengoko Faculty of eyoluntu Social Sciences yahlulwa amandla ezimbini ezizimeleyo kunye Faculty of Sciences ukuba iphalale yona ibe nabanye abathathu.
FAU ifikelele kwinqanam elitsha kwisiqingatha ebusika 1991/92 nini, okokuqala, it phezu 30,000 abafundi. De phakathi kwinkulungwane yeshumi elinesithoba, ngeenxa 40 ekhulwini abafundi ababhalise ikhono of Theology kunye noMthetho, kodwa ukususela ngo kwisiqingatha sesibini kwinkulungwane yamashumi amabini ipesenti enkulu yabantu umfundi batsaleleke ukuya iinkalo entsha ye zobunjineli ulawulo loshishino, zezoqoqosho nezentlalo nenzululwazi.
2000 - iinguqu ezintsha ezenzekayo
Ekuqaleni kwenkulungwane yamashumi amabini ananye, University of Erlangen-Nuremberg lijongene nemingeni ezintsha. Ukwandiswa kwezakhiwo kwi Südgelände (campus southern) kunye nokwakhiwa kwezakhiwo ezitsha kumbindi wesixeko njengangoku ukutshintsha imbonakalo yomzimba eYunivesithi. in 2000, i uNikolaus Fiebiger Centre Ezinto Medicine kwi Glückstraße indawo yangaphambili isakhiwo zemvelo 2001 wabona kuvulwa Campus omtsha Röthelheim kwisayithi yegumbi zokudubula endala. Isigaba sokuqala zokwakha iziko elitsha non-steel waqala ngo 2002.
IYunivesithi yakhawuleza ukuphumeza shintsho ukuya elitsha Bachelor kunye yeNkosi izidanga njengoko kumiselwe yi-wohlobo State Ministry of Sciences, Uphando kunye Arts, kwaye ezi nkqubo degree indawo yangaphambili iinkqubo Diplom kunye yiMagister ekupheleni kweminyaka.
koko, ukuze alondoloze indawo ephambili kukhuphiswano kumgangatho wehlabathi kwaye ukuhlangabezana nemingeni elizayo, iNdlu Yeengwevu livote 7 EyoMdumba 2007 ukwenza utshintsho ebanzi lwesakhiwo yeYunivesithi. ngokunjalo, kwisiqingatha ebusika 2007/08, ikhono abalishumi uhlelwe khono ezintlanu apho University uye namhlanje. Ezi zinto ke sub-hlulwa ibe ngamasebe kunye nezakhiwo zangaphakathi leyo eyenzelwe ukomeleza intsebenziswano ekhoyo kunye nokudala amathuba ukwenzela ezintsha.
Uyafuna ukuxoxa University of Erlangen Nuremberg ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
University of Erlangen Nuremberg kwi Map
iifoto: University of kuhlala Nuremberg ezisemthethweni kwiFacebook
University of reviews Erlangen Nuremberg
Dibanisa ukuxoxa University of Erlangen Nuremberg.